Cusbooneysiinta ka timid ILAP - Amjambo Africa
Mashruuca U-doodista Sharciga ee Muhaajiriinta (ILAP) waa ururka keliya ee adeegyada sharci ee socdaalka oo dhan ka socda Maine. Ka eeg boggayaga wixii macluumaad dheeraad ah https://www.ilapmaine.org
Waxqabadyada Maamulka Biden Illaa iyo hadda
Madaxweyne Joe Biden wuxuu xafiiska la wareegay Janaayo 20, wuxuuna qaaday tallaabo deg deg ah oo uu ku doonayo inuu ku sameeyo isbeddel xagga socdaalka ah, oo ay ku jiraan.
Jooji Mamnuuca Safarada Muslimiinta iyo Afrika. Madaxweyne Biden wuxuu soo afjaray xanibaadihii safarka ee ka dhanka ahaa muslimiinta iyo cunsuriyada Ilaali oo xooji waxqabadka dib loo dhigay ee imaatinka caruurta (DACA). Madaxweyne Biden wuxuu ku amray Xogheyaha Waaxda Amniga Gudaha (DHS) inuu qaado dhammaan tallaabooyinka uu u arko inay ku habboon yihiin, ee waafaqsan sharciga lagu dabaqi karo, si loo ilaaliyo loona xoojiyo DACA
Jooji Dhisida Darbiga Xuduudaha
Jooji Baratakoolka Ilaalinta Muhaajiriinta (Ku Nool Mexico) DHS ayaa hakisay waxa loogu yeero Borotokoollada Badbaadinta Muhaajiriinta (MPP), oo ku qasbay magangalyo-doonka ku sugan xadka koonfurta inay ku sugaan Mexico dhegeysiga maxkamadda. US DHS ayaa sidoo kale ku dhawaaqday hanaan ay ku maareyso qoysaska hadda ku xayiran barnaamijka.
Si ku meel gaadh ah u jooji masaafurinta qaarkood iyo isbadalka mudnaanta fulinta xoojinta socdaalka / DHS waxay soo saartay qoraal ay ku cadaynayso dhowr isbadal siyaasadeed oo muhiim ah, oo ay ka mid tahay hakinta masaafurinta qaar ee 100 maalmood iyo ahmiyadaha cusub ee hirgelinta socdaalka. Hakinta masaafurinta ayaa si kumeelgaar ah u joojisay maxkamada federaalka.
Hayso oo Kordhi Ilaalinta Liberia. Madaxweyne Biden wuxuu kordhiyay ‘bixitaankii fulinta ee dib loo dhigay’ (DED) ee dadka reer Liberiya ilaa Juun 30, 2022. Soo Celinta Tirakoobka Buuxda. Madaxweyne Biden wuxuu ka noqday isku daygii sharci darada ahaa ee madaxweynihii hore Trump inuu kaga reebo soo galootiga aan sharciga lahayn tirakoobka. Abuur Taskforce si dib loogu mideeyo qoysaska kala go’ay.
Wax ka qabashada Dhibaatada Magangalyo doonka ee Xuduudaha Koonfurta. Madaxweyne Biden wuxuu soo saaray Amar fulineed oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka soo food saara dadka magangalyo doonka ah ee xuduuda koonfureed. Amarku wuxuu qorsheynayaa inuu taageero kaalmada iyo dadaallada lagula dagaallamayo musuqmaasuqa Bartamaha Ameerika, wuxuuna dib u bilaabayaa barnaamij loogu talagalay carruurta iyo dhallinyarada Bartamaha Ameerika (CAM). Amarku wuxuu farayaa Xoghayaha DHS inuu dib u eego dhowr xeerar iyo siyaasado ka dhan ah magangalyo doonka, iyo inuu dib u eego dhaqso u saarista, taas oo ah nidaam masaafurin deg deg ah oo aan dhageysi lahayn.
Hagaajinta Nidaamka Socdaalka. Madaxweyne Biden wuxuu kaloo soo saaray Amar fulin ah oo ah \_”Soo Celinta Caqiidada Nidaamkeena Socdaalka ee Sharciga ah iyo Dhiirigelinta Isdhexgalka Dadka Mareykanka Cusub.\_” Amarkan wuxuu dib u dhisayaa Guddi-howleedka cusub ee Mareykanka, oo ay ku jiraan xubno ka socda hay’adaha fuliya siyaasadaha saameeya bulshooyinka soogalootiga ah.
Hagaajinta Nidaamka Socdaalka. Madaxweyne Biden wuxuu kaloo soo saaray Amar fulin ah oo ah \_’Soo Celinta Caqiidada Nidaamkeena Socdaalka ee Sharciga ah iyo Dhiirigelinta Isdhexgalka Dadka Mareykanka Cusub.\_’ Amarkan wuxuu dib u dhisayaa Guddi-howleedka cusub ee Mareykanka, oo ay ku jiraan xubno ka socda hay’adaha fuliya siyaasadaha saameeya bulshooyinka soogalootiga ah.
Dib-u-dhiska iyo Tayeynta Qaxootiga Qaxootiga. Madaxweyne Biden wuxuu soo saaray Amarka Fulinta ee dib u dhiska Barnaamijka Qaxootiga Mareykanka ee Qaxootiga sidoo kale waxaa ka go’an in kor loo qaado xadka qaxootiga ilaa 125,000 laga bilaabo bisha Oktoobar. Wuxuu amar ku siiyay DHS inay ka fiirsato wareysiga qaxootiga meel fog, wuxuuna faray dowladda inay shaqaaleysiiso saraakiil badan oo qaxooti ah. Amarku wuxuu caddeeyay in maamulka Biden uu mudnaanta siin doono dib-u-dejinta haweenka, carruurta, iyo kuwa kale ee wajahaya cadaadis xagga jinsigooda ama galmoodkooda Hanuuninta.
Amarkan ayaa sidoo kale ku amraya wakaaladaha inay baaraan qaababka lagu caawin karo dadka ku barakacay isbedelka cimilada.
Maamulka Biden wuxuu ku dhawaaqay sharci balaaran, oo dhameystiran oo ku saabsan dib u habeynta socdaalka oo loo yaqaan Sharciga Jinsiyada Mareykanka ee 2021. Sikastaba, fadlan la soco in sharcigani uusan aheyn mid hada sharci ah. Lacag ha siinin qof kasta oo kuu sheega inay kaa caawin doonaan inaad dhalasho ka hesho sharciga cusub ee Madaxweyne Biden, maxaa yeelay iyagu daacad ma aha. Lacag ha siinin qof kasta oo kuu sheega inay kaa caawin doonaan inaad dhalasho ka hesho sharciga cusub ee Madaxweyne Biden, maxaa yeelay iyagu daacad ma aha. Ma jiro sharci cusub waqtigaan.
Waxaan ubaahanahay caawinaadaada mustaqbalka si aan ulaxiriirno waftiga koongareeska Maine wixii kusaabsan sharcigan iyo sharciyada kale. Faahfaahin intaas ka badan ka raadi https://www.ilapmaine.org/legislative-priorities .^^
Julia Brown, Esq. waa U-qareemee iyo u-gaarid Agaasime ka tirsan ILAP
PreviousMa waxaad raadineysaa deeq waxbarasho? U diyaargarow hadda si aad u noqotid tartame sare
NextQalalaasaha Itoobiya \_”Waxaan ahaa caqli xumo in aan rumeysnaa in Itoobiyaanku aysan la dagaallami doonin gudaha